चुनावको मुखमा बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतमा १ हजार रुपयाँको नक्कली नोटको बिगबिगी ! – ebaglung.com
२०७४ मंसिर ९, शनिबार २२:३०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
नक्कली नोट भेट्टिएका वित्तिय संस्थाहरुले यसको सूचना प्रशासन वा प्रहरी समक्ष किन दिदैनन् ?
रबिना बोहरा, बागलुङ, २०७४ मंसिर ९ । बागलुङ, म्याग्दी र पर्वत जिल्लाहरुमा नक्कली नोट भेटिन थालेका छन् । चुनावकै मुखमा नक्कली नोट भेटिएपछि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि नक्कली नोटको प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । केही दिन अगाडि ग्रिन बैँकमा जम्मा गर्न ल्याएको पैसाको बिटोमा नक्कली नोट भेटिएको बताइएको छ भने म्याग्दी जिल्लामा त एक पछी अर्को १ हजारको नक्कली नोट बरामद भैरहेको छ । यस क्षेत्रमा सर्बप्रथम पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुस्मा बजार स्थित देव विकास बैँकमा १ हजार रुपयाँको एउटा नोट फेला परेको थियो ।
यसैवीच बागलुङ स्थित ग्रिन बैँकमा १ हजारको नक्कली नोट भेटिएको छ । बैँकका सुदिप राजण्डारीले ग्राहकले जम्मा गर्न ल्याएको पैसाको बिटोमा एक हजार रुपैँयाको नक्कली नोट फेला परेको बताए । नक्कली नोटमा कलम लेख्दा फुल्ने एवं सजिलै डल्लो पर्ने गरेको उनले बताए । चलन चल्तीकै जस्ता देखिने नोट सामान्य मानिसहरुले पहिचान गर्न नसक्ने भएकाले पनि त्यस्ता ठाउँमा नक्कली नोटको प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ । बजारमा भेटिएका नक्कली नोटको बीचमा रहेको स्टीकरमा एनआरबी नलेखिएको र हिमालको नजिकै रहेको गोलाकारभित्र अंकित तस्विर नभएको जनाइएको छ ।
बागलुङमा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुले यस्तो समयमा नचिनेका मानिसहरुले दिएको रकम पहिचान नगरी नबुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्ता नोटहरु बजारमा आउनुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक असर पर्ने भएकाले यस्तो गतिविधिमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । निर्वाचनका बेला खर्च हुने ठूलो रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट कारोवार नगरी सिधै हुने भएकाले यस्ता नोटहरुको चलखेल हुन सक्ने भन्दै नक्कली नोटका कारोवारीहरु यही बेला सल्वलाउन सक्ने भएकाले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सरोवारवालाले माग गरेका छन् ।
नक्कली नोट भेट्टिएका वित्तिय संस्थाहरुले यसको सूचना प्रशासन वा प्रहरी समक्ष दिएका छैनन् । उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बागलुङका प्रहरी नायब उपरिक्षक विश्वराज सिंह थापाले बैँकबाट कुनै खालको जानकारी नआएकाले अनुसन्धान नगरिएको बताए । उनले कुनै पनि वित्तिय संस्था तथा व्यक्तिहरुले नक्कली नोट भएको शंका लागेमा प्रहरीलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरे ।
जैमिनीको पैयुँथन्थापमा मतदाता परिचय पत्र लुटियो : परिचयपत्रकै कारण मतदानमा समस्या हुँदैन – मुनिअ